Saraakiil Maraykan Ah Oo Ku Kufsaday Askariyad Hawl Gal Ka Socda Soomaliya Oo Shaqadooda Loo Fasaxy – Heemaal News Network
Taliyeyaal ka tirsan ciidamada gaarka ee Mariiniska Mareykanka ayaa loo oggolaaday inay dib u shaqo galaan, ka dib markii lagu waayey eedeymo ahaa inay kufsadeen qaar ka mid ah Haweenka ka tirsan Ciidamada Maraykanka ee ku sugan bariga Afrika.
Saraakiishan oo lagu kala magacaabo Taliye Jarrod Donaldson iyo Jon Franklin waxaa bishii May ee sanadkan dib loogu celiyey dalka Maraykanka, waxaana loo sheegay inay dib u shaqo geli karaan, inkastoo ay muteysan doonaan Ciqaab dhanka Maamulka ah.
Saraakiisha Difaaca ee Maraykanka waxay sheegeen in mid ka mid Taliyayaashaasi lagu soo eedeeyey inuu xodxodasho ah kula kacay Askariyad Maraykanka, xilligii askartaasi loo daad-gureynayey howlgalka ka socda Soomaaliya.
Dhinaca kale, Labada Sarkaal ee loo fasaxay inay dib u hawl-galaan waxay ka tirsan yihiin ciidamada gaarka ee Mariniska Maraykanka ee US Navy Seal ee ka hawlgala Saldhigyadda Milliteriga Maraykanka ku leeyihiin dalalka Jabuuti iyo Somalia.
Marykanka Oo Qirtay In Uu Ku Fashilmay Dagaalkii Afghanistan
Dowlada mareykanka ayaa ku fashilantay howlgalka ay 17-dii sano ee la soo dhaafay ay ka waday wadanka Afghanistan kaasi oo ka dhan ah dagaal yahanada Taliban. Mareykanka ayaa la sheegay in ciidan ahaan iyo dhaqaalo […]
Magaalo Maraykanka ku Taalla Oo Gabi Ahaanba Go’doonsan.
Magaalo xeebeedka Wilmington ee gobolka North Carolina ayaa gabi ahaanba ka go’day gobolka intiisa kale, waxaana arrintaas sababay daadadka ka sii daraya. Masuuliyiinta ayaa sheegay in dhammaan waddooyinka gala iyo kuwa ka baxa aan la […]